Izimpawu Zonyaka Omusha 2018 - olunembile kunayo yonke uthando, umndeni wenjabulo, umshado, ukuzalwa kwengane, imali nengcebo
Izibonakaliso ezinembile kakhulu zoNyaka Omusha we-2018 Yellow Earth Dog
Izimpawu ezifanele zoNyaka Omusha 2018 zisho ukuthi yini okudingeka uyenze ukuheha inhlanhla nokuphumelela empilweni yakho. Uhlu lwezibonakaliso ezinembile kunazo zonke zemali, inzuzo, inhlanhla ebhizinisini, umshado, ukukhulelwa kanye nokuzalwa kwengane, efanelekayo emhlanganweni wonyaka wezinja, uzothola khona lapha. Zilula futhi azidingi ukuzikhandla okukhulu ukufeza, ngakho kungani ungasebenzisi ngokunenzuzo okhokho ngenxa yempilo yomndeni wakho, ukuthola ukuzinza kwempilo, impilo nokuphila isikhathi eside.
Thatha impilo nokuphila isikhathi eside kuNyaka Omusha 2018
Izimpawu zasendulo zonyaka omusha empilweni nasekuphiliseni isikhathi eside kuzosiza esikhathini esizayo ukugwema izifo ezincane nezifo ezimbi.
Ngaphambi koNyaka Omusha, geza ngamanzi ekamelweni lokushisa, uthele indebe bese ulibeka phezu kwesithwathwa. Uma phakathi kwamanzi amanzi ephoqa futhi ehlanganiswa neqhwa elibushelelezi leqhwa, ukuphila okude kulindeleke. I-fossa eyenziwe endaweni ebomvu ibonisa ukuthi indlela yomhlaba isondela ekupheleni kwayo.
Ngosuku lokuqala lonyaka ozayo, ulethe isitsha seqhwa elihlanzekile endlini, ucibilike esimweni segazi futhi ugeze ngamanzi isonto, uthi: "Amanzi avela ku-nebushka azolungisa konke. Futhi mina, inceku kaNkulunkulu (igama), uBeautiful uyokwengeza ubuso obumhlophe. Egameni likaYise neNdodana noMoya oNgcwele. Amen. " Imithi yasendulo ithi ngemva kwalokhu inqubo yokuguga iyancipha, futhi isikhumba ebusweni siba bushelelezi, sibe nesineke futhi sinwebeka, njengengane.
Uma usuku lukaNcibijane lokuqala lukhuleka kuNkulunkulu futhi lufisa izihlobo zakhe impilo enhle nokuphila isikhathi eside, uMsindisi uzokuzwa futhi avikele wonke umndeni ekuguleni nezinye izifo ezinyangeni ezingu-12 ezizayo.
Ngomhla ka-1 Januwari, kusukela ekuseni kuze kube semini, akukho okusheshayo, unakekele ngokukhethekile futhi unakekele ngokwengeziwe, njengoba ubungozi bokuwa, ukuhlukana nokulimala kokuqina okukhulu kukhulu. "Ubani ophuthumayo manje - uphula amathambo futhi aphuze igazi," kusho abantu abadala ngalelo langa.
Ukuze ususe isifo somlenze, ngoJanuwari 3, shiya indlu, uye endaweni yezitolo ze-bazaar bese uthenga amasokisi amhlophe omhlophe. Qinisekisa ukuthi umthengisi usemncane kunesiguli ngesikhatsi. Angikwazi ukuthatha izidingo zokuthenga. Bese ugqoka ukuthenga kwabo futhi maduzane ubuhlungu buzoguqulwa, bese buyela phansi ngokuphelele.
NgoJanuwari 5, qaphela ngokucophelela lapho usebenza ngezinto ezihlabayo zokubhoboza / ukusika. Ukunqunywa noma amanye amanxeba atholakele ngalolu suku, ukuphulukisa kuyoba isikhathi eside futhi kunzima.
Unganaki izimpawu zoNyaka Omusha empilweni nasekuphiliseni isikhathi eside. Naphezu kokulula kwabo nobuhlakani, basasebenza futhi banike wonke umuntu ithuba lokubhekana nezinkinga zabo ngaphandle komzamo omkhulu.
Ziyini izimpawu zoNyaka Omusha 2018 ukuze zigcinwe, ukuze indlu ibe nemali
Indlela yokuheha ukuchuma nokuthi yiziphi izimpawu zoNyaka Omusha ka-2018 ukuze zigcine, ukuze kugcinwe imali, hhayi nje kuphela abantu abangakholelwa enkolelweni abangakholelwa ukuthi izimangaliso, abenzi bemimoya kanye ne-leprechauns banesithakazelo, kodwa futhi abanama-pragmatiste abanobuchule abathandayo kuphela indlela enengqondo yezindaba zezimali.
Izimpawu ezivelele zoNyaka Omusha 2018, ukuze imali igcinwe njalo
Zonke izindaba ezifanele kufanele zigcwaliswe ngaphambi komhlaka-31, bese kuthi ngesonto elilodwa lingalokothi libole imali, hhayi ukuboleka imali bese kungakhokhelwa izikweletu. Ngaphandle kwalokho, ezinyangeni ezingu-12 ezizayo ngemali kuyoba nezinkinga ezinkulu.
Ngakusasa ngo-Disemba 31, zibhale incwadi encane yemali, uyibeke emvilophini kanye nekhadi leposi elihlelekile kanye nehlelo lephepha lehlelo elijwayelekile. Thumela umlayezo ngeposi ekhelini lakho. Uma kufika, vula imvilophu, ufunde, futhi ufake imali esikhwameni ngenhlanhla bese uheha amanani amaningi.
Ngaphambi koNyaka KaNcibijane, ngaphansi kwezindwangu zetafula ehlanganisa itafula lokugcoba, ubeke izinhlamvu zemali ezine eziphuzi (1 ekhoneni ngalinye). Isinkwa kufanele sinqunywe ngaphambi kokuba sibe mnyama ngaphandle, kungenjalo kuzodingeka ukuthi ukwazi ubumpofu ngonyaka ozayo.
Esikhathini efrijini eshalofini elingezansi, faka isikhwama sendwangu sombala obomvu ngezinhlamvu zemali ezintathu, ezitholakala nge-bars up. Ukuze ube nemali njalo endlini, akunakwenzeka ukukhipha isikhwama unyaka wonke.
Ukuze ungaphumeleli endlini, uJanuwari 1 kungcono ukungayi ndawo futhi wamukele izivakashi kuphela ensimini yayo. Ngesizathu esifanayo, ungalahli udoti futhi ungaqedi izinto zakudala, izinto ezingadingekile.
Ukuthola isipho esingalindelekile ngoJanuwari 1 uthembisa ukuthi ngeke kube nezinkinga ngemali ezinyangeni ezizayo.
Ekuseni ngoJanuwari 1, ungahlanzi ngesipho noma u-foam, kodwa ngezingcosana zemali, ngakho-ke ngo-2018 imali ngokwayo yawela ezandleni.
Emva kokuvuna, ungashiyi itafula lonyaka omusha lingenalutho. Ungalahleli izinsalela zokudla ukuze ungakwazi ukulahlekelwa inhlalakahle yakho yezimali nabo.
Ukugubha uNyaka Omusha kukho konke okusha nokuhle, ikakhulukazi, kuthinta izingubo eziseduze ngangokunokwenzeka emzimbeni (zangaphansi kwezingubo zangaphansi, i-pantyhose, amasitokisi, njll). Khona-ke ukuchuma kwempahla ngeke kushiye, futhi imali izoqala ukuhlala njengokungathi ngomlingo.
Beka itafula lokugcoba okungenani izitsha ezingu-7, futhi ngaphansi kwesihlalo sakhe sibeke imali engu-7 encane. Lokhu kuzosiza ukuxazulula izinkinga ngemali futhi kuzosiza ukuthuthukisa isimo sezimali. Ukuze uqinise isenzo ufake imali eyodwa ngaphansi kweplate yakho.
Ngaphambi kuka-Eva Unyaka Omusha ugobe ihlelo noma i-coin ezembatho zakho. Lesi senzo sizoheha umlingo onamandla kakhulu wezezimali nezemali ngeke ushiye umndeni unyaka wonke.
Lapho beqala ukushaya ama-chimes, bamba ngesandla sokunene imali encane. Ngenkathi yeshumi nambili, yiphonsa ingilazi ye-champagne uphinde uphuze ngokushesha. Le mali kufanele ifakwe esikhwameni futhi ingasetshenziswa. Le mascot encane yemali, enesifo se-Eve's New Year, iyoheha inzuzo enkulu yezezimali futhi iqinisekise inhlanhla ebhizinisini.
Izimpawu zoNyaka Omusha 2018 ngomcebo, imali nenhlanhla
Ukwazi izibonakaliso zasendulo zonyaka omusha ngomcebo, imali nenhlanhla, ungaletha kalula ukuchuma, injabulo nokuchuma empilweni yakho.
Beka itafula lokugubha amakhandlela angu-7 wombala obomvu bese uwayeka ngokushelile kuze kube sekupheleni. Ukukhanya kwabo kuzokwenyusa ukuchuma nemali inhlanhla endlini yabanikazi.
Lungiselela izitsha ezingu-12 ezahlukene bese uzibeka etafuleni. Khona-ke inqwaba emndenini izoba ngonyaka ozayo. Ngo-Eva Wonyaka Omusha zonke izitsha kufanele zizame, ukuze izinyanga ezingu-12 ezilandelayo zingabi nasidingo kwanoma yini.
Kucebile, inhlanhla nokuphumelela kuhamba kuzo zonke izinyathelo, kunconywa ukuba ugubhe uNyaka Omusha ezembatho ezinhle ezinhle, ngemali yemali ephaketheni lakho kanye nemicabango emihle ekhanda lakho.
Izimpawu zoNyaka Omusha 2018 zothando, ukwethembeka kanye nenjabulo yomndeni
Ukuze ungalokothi ulahlekelwe inhlalakahle endlini futhi ugcine nomuntu wakho womshado ubuhlobo obuhle nokuqonda okuphelele, udinga ukwazi ukuthi yiziphi izibonakaliso zonyaka omusha we-2018 uthando, ukwethembeka kanye nenjabulo yomndeni okuzodinga ukugcinwa. Zilula, zifinyeleleka ekusebenzeni futhi, empeleni, usizo, ngaphezu kwalokho, seluvele lukhona ngaphezu kwesithandwa sabathandi.
Uhlu lokubingelela koNyaka Omusha ngothando, ukwethembeka kanye nenjabulo yomndeni
NgoJanuwari 1, qapha ngokucophelela ukuthi abangaphandle bangena ekamelweni lomshado, futhi okubaluleke kakhulu, ungabe uhlala embhedeni. Uma lokhu kwenzeka, khona-ke kulo nyaka umyeni noma umfazi uzohola inoveli ohlangothini.
Ngaphambi kwedili lomnyaka omusha, ungadibanisa imilenze yetafula lokugubha ngentambo. Khona-ke ngonyaka ozayo umndeni womndeni ngeke uphule noma yini, futhi izinkinga nokuhlukaniswa isikhathi eside kuzodlula umbhangqwana oshadile.
Ngesikhathi sokulwa kwe-chimes ne-glass ye-champagne oyikhonzile futhi uphuze okuqukethwe phansi. Khona-ke lo mbhangqwana uzojabula ngonyaka ozayo futhi ubuhlobo ngeke buphazamise izingxabano, ukuhlubuka nokuphikisana.
Kubonisa ukuthi uNyaka Omusha ozayo uzoshada nentombazane encane
Intombazane encane idinga ukugcina izimpawu ezikhethekile zoNyaka Omusha ukushada ngokushesha futhi ngaphandle kokulibala. Uhlu luvezwe ngezansi futhi aludingi imizamo emikhulu, kodwa kakhulu landisa amathuba okudala umndeni oqinile nomuntu othandekayo.
Uhlu lwemishado yonyaka omusha yamantombazane amancane
Uma kusasa ngoMnyaka Omusha izinwele ziqala ukuwa, ngakho-ke, esikhathini esizayo esiseduze, intombazane izoshada.
Kumnumzane omusha onenhloso ejulile uvele ngokushesha, ngaphambi kweholidi kuyisifiso sokuthenga ingubo noma i-suit kumbala oyintandokazi yomphathi wonyaka ozayo.
Ukuqeda ukwehluleka othandweni, udinga ukushisa ikhalenda lonyaka odlule, nomlotha wokuqeda umoya bese uthi ngokuzwakalayo: "Njengoba umlotha uphuma, ngakho-ke zonke izinselele zami zibalekela."
Ukufika kwezivakashi zeholide kufanele kuhlale ngokushesha etafuleni. Ngokushesha lokhu kwenziwa, ngokushesha inkosikazi yendlu izohlangana nomlingani wayo bese ishada.
Ngaphambi Konyaka Omusha, awukwazi ukwenza izinwele zakho phambi kwabantu abangabazi. Uma kungenjalo, ithuba lokushada lizohlehliswa isikhathi esithile.
Intombazane efuna ukushada masinyane, kufanele ihlale etafuleni phakathi kwabazalwane ngo-Eva Wonyaka Omusha. Khona-ke iphupho lakhe lizogcwaliseka.
Ngeke ube yintombazane engashadile ehlezi ekhoneni letafula, kungenjalo eminyakeni engama-7 ezayo akekho ozoyishada naye.
Ungadla ngoNyaka Wonyaka Omusha kuphela ngenkathi uhlezi. Labo abazodla ukuma, ngonyaka ozayo ngeke bashade.
Izibonakaliso zangempela zeHholide Lonyaka Omusha lokukhulelwa nokuzalwa kwengane
Zonke izimpawu zoNyaka Omusha ekukhulelweni nasekuzalweni kwengane zinezimpande zasendulo. Abadala bawadlulisela ezizukulwaneni ngezizukulwane ngokusebenzisa umugqa wamakhosikazi futhi baqhubeka ekusebenzeni okugunyazayo.
Ephaketheni yengubo yonyaka omusha, indoda nomfazi, abafisa ukuba nomntwana, bagqoke into eyodwa encane yomntwana. Ngesikhathi soNyaka Omusha iya endaweni yonke ngesicelo sokunikeza indlalifa. Lezi zwi ziphindaphinda izikhathi ezingu-6-10, ngokucacile zigxila esihlokweni. Ukukhulelwa emva kwalokhu kujwayele kuvame ukwenzeka ngenyanga ezayo.
Ukuze ukhulelwe umfana oNyaka KaNcibijane, owesifazane ubeka ibhulukwe ngaphansi kwebhulukwe lomyeni wakhe noma ubeka isigqoko ekhanda lakhe. Uma lo mbhangqwana ufuna intombazane, umyeni wakhe ubophe ikhanda lomama wesifazane ngaphambi kokukhulelwa.
Owesifazane okhulelwe, owafika edilini Lonyaka Omusha, kufanele abe nesikhathi sokuqala ukudla kuqala. Khona-ke ukubeletha kuzodlula kalula futhi ngempumelelo, futhi umntwana uzoqina futhi aphile.
Uma umama wengane esanda kubeletha, ezondla ngokwayo, uzomema izivakashi emcimbini, ingane izokhathazeka futhi ilale kabi unyaka wonke.
Owesifazane othi eNyakeni Omusha awudingi ingane noma uyaphazamisa, ubeka ingozi yokulahlekelwa yikho. UNkulunkulu uzosusa ingane engadingeki, ukuze esikhathini esizayo ngeke ihlupheke ngenxa yokuntuleka kothando kubazali.
Izimpawu ezaziwa kabanzi ngesifiso soNyaka Omusha
Izimpawu eziningi zoNyaka Omusha 2018 zihlobene nesimo sezulu, imali, ingcebo, uthando, umshado, ukukhulelwa kanye nokuzalwa kwengane. Kodwa zikhona lezo ezibonisa ngokucacile ukuthi isifiso sizogcwaliseka noma cha. Zingasetshenziswa ngehora lokuqala kokubaluleka kokubaluleka konyaka noma ngqo ngesikhathi sonyaka we-Rooster ngonyaka weNja.
Izimpawu ezinembile kunazo zonke futhi ezilungile zoNyaka Omusha ngesifiso
Ngaphambi kokuba ubheke izibonakaliso zonyaka omusha, udinga ukwenza ukuqagela okufanele. Ungagxila ezintweni ezincane ngalesi sikhathi. Kungcono ukukhulelwa okuthile okubalulekile ngangokunokwenzeka empilweni yakho, bese ubuza indawo yonke uma kukhona ithuba lokwenza iphupho ligcwaliseke.
Ngo-Eva Wonyaka Omusha nje ngaphambi kwempi ye-chimes, yenza noma isiphi isifiso futhi uqonde ngokucacile imicabango kuyo. Uma iwashi elikhulu lezwe liqala ukushaya, thatha amagilebhisi angu-12 wesayizi ophakathi bese uwadla. Uma unesikhathi sokwenza le nqubo ngaphambi kokushaya, isifiso sizogcwaliseka ngokuqinisekile.
Iphupho lakhe elithandekayo kakhulu ukubhala ngesandla ephepheni elincane. Imizuzu engu-1-2 ngaphambi konyaka omusha, bashise umbhalo ngombhalo, uqoqe umlotha bese uthele egilakeni le-champagne. Phakathi nempi yama-chimes, umuntu unezikhathi zokuphuza amanzi "omlingo". Uma kungekho okushiywe ukuqhuma kokugcina esibukweni, isifiso sizogcwaliseka, ngaphezu kwalokho, ngaphakathi kwezinyanga ezingu-1.5-2.
Ngaphansi kokulwa kwewashi, gxuma phezulu futhi wenze isifiso. Uma kuvela ukuthi ubuyele phansi futhi ungawa, ukugcina ibhalansi, iphupho lizoba ngokoqobo. Ukungena ngokuphumelela kakhulu kuzobonisa ukuthi endleleni eya emgomweni ohlosiwe kuyoba nezinkinga ezithile.
Uma kuNyaka Omusha ngokushesha uphuma efasiteleni bese ubona isibhakabhaka sezinkanyezi, kuyoba nempilo ejabulisayo, engakhathazeki ngaphambili. Amafu e-Light cirrus ayathinta izinkinga ezincane, futhi izinhlanzi ezinzima zeqhwa zizokutshela ukuthi yimpumelelo eyodingeka inqobe.
Izibonakaliso ezinembile kunazo zonke, ezihunyushwe kahle ngoNyaka Omusha ka-2018 ngesimo sezulu, imali, ingcebo, umshado, uthando, ukukhulelwa kanye nokuzalwa kwengane kuzokwenza ukwazi ukuthi kusengaphambili lokho okumangazayo isithunzi somlingo sesikhathi esizayo silungiselela - iNjabulo Yomhlaba. Lolu lwazi ngeke lube lukhulu kunoma ubani futhi luzosiza ukuhlela impilo yakho ngokucophelela.
Isibikezelo sezinkanyezi ngo-2011 kuphela
Indlela yokwenza umuntu enze uthando
I-Spaghetti ne-Cherry, isitshalo seqanda kanye nobhontshisi obuhlumekile
I-Lemon Pie Ginger Sap
Amaski wezinwele zomama
Hamu, ubhakwa ngendwangu
I-Blancmange nge-raspberry sauce
Kungani abafana bengakunaki?
Indlela yokugcina izimonyo?
I-solarium noma i-tan esheshayo, okungcono?